माग सम्बोधन नभएको भन्दै सुकुम्बासी संघर्ष समितिद्वारा नगरपालिकामा तालाबन्दी – Hello Punarwas
पुनर्वास, २७ पौष
स्थानिय सरकारले सुकुम्बासीहरुको समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै सुकुम्बासी संघर्ष समिति पुनर्वासले नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ ।
आईतबार पुनर्वास नगरपालिका–३ स्थित पैसट्ठी बिघाबाट नाराबाजी सहित विरोध ¥याली निकालेर आई.बी.आर.डी बजार हुँदै नगरपालिका कार्यालय पुगेका सुकुम्बासीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हुन् ।
विरोध ¥याली सहित नगरपालिका पुगेका सुकुम्बासीहरुले नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई पन्ध्र मिनेटमा निस्कने समयावधी दिँदै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि बाहिर अशान्त वातावरणका कारण नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, सूचना अधिकृत, कार्यपालिका सदस्य, नगर प्रमुखका स्वकीय सचिव लगायत केहि कार्यालय सहयोगीहरु कार्यालय भित्रै रहेको अवस्था थियो । यता उनीहरु भित्रबाट ननिस्किएको भन्दै बाहिर सुकुम्बासी संघर्ष समिति पूरै चर्को नाराबाजी सहित विरोधमा उत्रिएका थिए ।
दुई सुरक्षा निकाय र संघर्ष समितिको समन्वयमा उहाँहरुलाई कार्यालय बाहिर निकाल्न खोज्दा सुकुम्बासीहरुको एक हूलले पछाडीको गेटमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेपछि फेरि नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र नगर प्रमुखका स्वकीय सचिव कार्यालय भित्रै प्रवेश गर्न बाध्य भए ।
उहाँहरु पुनः भित्र प्रवेश गरेपछि गेट बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरु उर्जावान तरिकाले आन्दोलित बने ।
आन्दोलनकै क्रममा सुरक्षाकर्मी र सुकुम्बासीहरु बिच धकेलाधकेल र लाठी चार्जसम्म हुन पुग्यो । सोहि क्रममा दुवै पक्षलाई सामान्य चोट पनि लागेको थियो । सुरक्षाकर्मीहरुले सुकुम्बासीहरुको भीड नियन्त्रण गर्न नसक्दा नगरपालिकाको झ्यालको सिसा समेत तोडफोड भएको छ ।
नगरपालिकामा किन उर्लिए सुकुम्बासीहरु ?
सुदुरपश्चिमका अन्य पालिकाहरुमा सुकुम्बासी आयोग गठन भई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरणका लागि लगत संकलन सुरु भईरहेको छ । त्यहि प्रक्रिया पुनर्वास नगरपालिकाले शुरु नगरेको भन्दै पौष ७ गते सुकुम्बासी संघर्ष समिति पुनर्वासले नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र दियो । ज्ञापनपत्र दिएको १३ औं दिन बितिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि पौष २० गते सो संघर्ष समितिले करिब दुई हजार जनाको ठूलो संख्यामा एक घण्टे मौन कार्यक्रम ग¥यो । त्यस पश्चात २६ गते पौषमा नगरपालिकामा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने जनाए अनुसार आईतबार करिब ८ हजार सुकुम्बासी नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्न उर्लिए ।
के भयो त अन्तमा ?
सुकुम्बासीहरुले नगरपालिका दिनभर घेराउ गरेपछि अन्तमा सुरक्षाकर्मी र सुकुमबासी पक्षबीच झडपको सिर्जना भयो । पुनर्वासको जनपद र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षाबाट विवाद साम्य असम्भव देखिएपछि प्रहरी निरिक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी गण धनगढी र ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीको थप प्रहरी टोली नगरपालिका आईपुग्यो । करिब सय जना सुरक्षाकमी तैनाथ भएपछि केहि भीडभाड कम भयो । नगर प्रमुखलाई प्रहरी स्कटिङ मार्फत कार्यालयबाट निकालियो । त्यसपश्चात संघर्ष समितिले मुलगेटमा पनि अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरे ।